आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कुन मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी ? – Everest Dainik – News from Nepal
आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कुन मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी ?
काठमाडौं, असार २९ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । शनिबारसम्म मन्त्रीको टुंगो लगाइने र आइतबार विस्तार गर्ने सहमति सत्तासाझेदार कांग्रेस र माओवादीबीच भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले २४ जेठमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि कांग्रेस र माओवादीबाट ३–३ र लोकतान्त्रिक फोरमबाट एक गरी सातजनालाई मन्त्री बनाएका थिए । दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान संशोधनपछि गर्ने उनको तयारी थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपा सहमत नहुँदा संशोधनका लागि दुईतिहाइ नपुग्ने भएपछि देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा लागेका हुन् ।,नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।